Madaxweyne Biixi oo Weftiga Shiinaha Ka Diiday Qorshe Ay Ku Doonayeen In Xidhiidhka Loogu Jaro Taiwan | Gabiley News Online
Sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah oo ka tirsan xukuumadda Somaliland, Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la kulmay wefti ka socda dalka Shiinaha oo ka socda Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Mr. Qin Jian oo ku sugnaa hargeysa ilaa 1-dii August.
Danjire Jian oo dadaalkiisii ​​ahaa inuu la kulmo Madaxweyne Biixi ay ku fashilmeen ayaa waxaa sii xoojiyay saraakiil sarsare oo ka tirsan Wasaaradda Arimaha Dibadda Shiinaha Salaasadii.
Sida laga soo xigtay ilo xog-ogaal u ah shirar isdaba joog ah oo qaatay saacado badan, weftiga Shiinaha waxay u soo bandhigeen xidhmo horumarineed oo ay ka mid yihiin kaabayaasha wadooyinka iyo garoonka diyaaradaha iyo dhismaha Xafiiska Xidhiidhka ee Somaliland ay u gudbiyeen Madaxweyne Biixi iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo ku saabsan xaaladda in Somaliland ay si dhakhso leh u joojiso xidhiidhka laba geesoodka ah ee Taiwan.
Ilo wareedyo ayaa intaa ku daraya in Madaxweyne Biixi uu diidey shuruudihii weftiga ee shuruud ku xidhnayd isla markaana uu ku wargaliyay inay ka hor imanayaan codsigooda ah inay xidhiidhka u jaraan Taiwan.
Kulamadaas waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Biixi oo uu ka mid yahay Dr. Sacad Cali Shire Wasiirka Horumarinta Maaliyadda, Mudane. Maxamuud Xasan Sacad (Saajin) Wasiirka Ganacsiga iyo Mudane. Jaamac Cigaal Wasiirka Macdanta iyo Tamarta.
Jamhuuriyadda Dadweynaha Shiinaha waxay ku andacootaa Taiwan qayb ka mid ah dhulkeeda waxayna si adag uga soo horjeedsatay in xidhiidh laba geesood ah lala yeesho Somaliland.
Madaxweyne Biixi waxa uu ka codsaday qarsoodiyayaashi dhow inay sahamiyaan qaababka lagu xoojin karo xidhiidhka laba geesoodka ah ee ay la leedahay Taiwan isla markaana ay sahamiyaan suurtagalnimada aqoonsiga labada dhinac u dhexeeya Taiwan iyo Somaliland iyo baadhista dhow ee Sharciga TAIPEI.
In kasta oo Shiinuhu ku guulaystay horaantii hore inuu ka hortago Taiwan inay xidhiidh laba geesood ah la yeelato dalalka kale ee Afrika, haddana waa markii labaad ee ay Somaliland ka tanaasusho dadaallada Shiinaha ee ka hortagga xidhiidhka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal.